सभासदका चलनचल्तीका भाषा
संसदको बैठकमा सभासदहरु बोल्नु स्वभाविकै हो । अझ संसद जनताको प्रतिनिधित्व हुने थलो भएकोले उनीहरुले स्थानीयस्तरमा उठेका समस्याको सम्बोधन गराउनुपर्ने स्वभाविकै पनि हो । तर संसदको बैठकमा चाहे शुन्य समयमा होस् वा विशेष समयमा, सभासदहरुको बोल्ने शैली कुनै शीर्ष नेताको भन्दा कम्तीको छैन । राजनीतिको मुलधारमा रहेका विवादका विषय एमआरपी छपाई, बर्दिया हत्याकाण्डबारे खुबै बोल्न रुचाउँछन् उनीहरु ।
यतिसम्म कि उपत्यकामा भएका डकैतीका घटनाको बारेमा कुर्लीकुर्ली बोल्छन् । तर आफ्ना सर्वसाधारणले भोग्नुपरेका समस्याबारे बोल्दैनन् । बजेट नसकिएको कुरा छन् । भ्रष्ट्राचारका कुरा छन् । विकास निर्माणका कुरा पनि होलान् । केहीले भने उठाउँछन् । उदाहरणका लागि कर्णालीका सभासदहरुले सुदुर तथा मध्यपश्चिम विधेयकको बारेमा कुरा गरे । सुनसरीमा एक महिलाले यातना पाएको कुरा पनि भए ।
शीर्ष नेताले उठाएका छँदै छन् नि, एमआरपीको विषयमा कुरा त । ध्यानै छैन । संसदभित्रै पनि सभासदलहरुले सुर्धानुपर्ने कुरा पनि छन् । बोल्दाखेरि हुने त्रुटिको बारेमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । संसदमा बोल्न नसक्ने सभासदले जनताका मागका बारेमा कसरी आश्वासन दिनु, कसरी समाधान भएको जानकारी दिनु । धन्य, माओवादीका एकजना सभासदले संसदमै नियम पालना नभएको भनेर जानकारी गराउन खोजे । उनको भनाई थियो कि संसद बैठकमा एकजना पनि मन्त्री छैनन् भनेर ।
बिचरा ती सभासदले नियमापत्तिबारे जानकारी गराउँदै गर्दा एकजना मन्त्री भनेर मुसुमुसु हाँस्दै पछाडि बसिरहेका थिए । सभामुखले मन्त्री बसेको देखाएपछि ती सभासदको खिसिक्क हाँस्नुबाहेक अरु के नै उपाय थियो र । आन्तरिक सुधारका कुरा गर्दा पनि सभासदहरुले विचारै नगरीकन बोल्ने बानी देखिन्छ । यस्ता विषय पनि सुधारे कसो होला । भ्रष्ट्राचार, सुशासन, शान्तिप्रक्रिया जस्ता विषयमा कागजै नहेरीकन बोल्न सक्ने जनताका प्रतिनिधिले साना कुरामा पनि त ध्यान दिनुपर्छ नि ।
उच्चस्तरीय संयन्त्रको कुरा छाडौं, तीन दलका नेताहरु अनि अधिकांश राजनीतिक माहौल नै सरकार परिवर्तन अनि झिनामसिना कुरामा झुन्डिरहने चलनचल्ती संसदमा पनि झल्किन्छ । किनभने संविधान बनाउने ठुलो जिम्मेवारी बोकेका दलहरु अनि तिनका सभासदहरु तिनै सरकार को विरोध, एक दलले अर्को दलका कार्यकर्तालाई कुटेको कुरा मात्रै हुनु पनि बडो महत्वका साथ उठाइन्छ । बरु झाडापखाला र गर्मीले पारेको क्षतिका बारेमा ध्यानै छैन । तस्वीरमा, संसद बैठक ।
April 09, 2010 3:54 am
कैदीलाई मारेर रामराज्यको अपेक्षा
हजारौं बेपत्ता नागरिकको अवस्था लामो समयसम्म पत्ता नलाग्ने ठाउँमा सुरक्षाकर्मीद्धारा एक दुई पटक वा केही मान्छे मारिए भने सामान्य जस्तै लाग्न सक्छ, शासकहरुलाई । हतियार हातमा नभएका मानिस त निरीह नै भन्ने ठानेर नै बर्दीधारीहरुले कम्तीमा हजार जनालाई बेपत्ता पारे । भलै, द्धन्द्धकालमा बेपत्ता भएका मानिसको संख्या केही मानवअधिकारवादी संगठनले भने केही कम देखाएका छन् । सत्तामा बस्नेले सर्वसाधारण, सचेत नागरिकको आवाज सुन्ने हिम्मत नगरेकाले नै यस्ता घटना भएका छन् ।
राज्यले के ठीक के बेठीक भनेर सर्वमान्य मान्यता नै स्थापित गर्न सकेको छैन । तराई सशस्त्र संघर्षरत, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न, खुबै गन्यमान्य भनिएकालाई पनि सरकारमा पहुँच छ भने छुटकारा मिल्ला होइन भने सानोतिनो मानिस त खोरबाट निस्कन गाह्रै पर्छ । विश्वका धेरै अधिनायकवाद जस्तै नेपालका नागरिकले भोग्नुपरेको अवस्था पनि एक हो ।
पछिल्लो शिकार बनेका छन् पर्वत जिल्ला कारागारमा बसेका एक कैदी । दमौली कारागारबाट राति एक बजे भाग्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट पितम बिष्टको मृत्यु भयो । सामाजिक, आर्थिक, मानसिक कारणले कुनै अपराधमा संलग्न थिए, अदालतको ठहर त्यही थियो, त्यसैअनुसार उनी कारागारमा बसेका थिए । मानिस न हो, बाटो पत्ता लगाए, भाग्न खोजे तर बिचरा गोलीले मारिए ।
हो, यहींनेर राज्यको कमजोरी छ, कारागारको उचाई १२ फिटमात्र छ । कैदीलाई राख्ने औपचारिकताका लागि हो कि, सजायका लागि ? यो प्रश्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखलाई सोध्ने हो भने पैसो छैन राम्रो कैदीखाना बनाउनलाई भन्लान् । त्यो भन्दा माथिका प्रशासकलाई सोध्दै जाने हो भने सही कुरो बुझ्न एक महिनै लाग्ला । गृहमन्त्रीलाई सोध्ने हो भने उनले भनिदेलान् शान्ति सुरक्षा नभईकन प्रकोप समाधान हुन्न भनेर ।
शान्ति सुरक्षा भन्न निकै आउँछ, अधिकारीहरुलाई तर कसरी, किन भएन भन्ने प्रश्नको उत्तर उनीहरुसँग छैन । आखिर सरकार बचाउने खेलो न छ । एकदुईजना कैदी मारिएको घटना कति पो ठुलो लाग्ला र, यत्रो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका मन्त्रीहरुलाई । त्यसैले हुनुपर्छ, कसैले लेखेको थियो, भजनमण्डली हुन् अहिलेका मन्त्रीहरु, भनेर । बिचार गरेरै होला लेखेको । जहाँसम्म चेतावनी दिंदा र हवाईफायर गर्दा पनि भागेको भनेर जनाइएको छ । त्यो त बाँचेका प्रहरीले भनेका हुन् मर्ने व्यक्तिले के नै भनेको छ र । कुरै विश्वसनीय छैन । बरु यस्ता घटना फेरि हुन नदिन पर्खाल बलियो बनाउने अनि, झुटा कुरा बोल्न छाड्ने हो कि, राज्यको तलब खाएर बन्दुक समात्ने सुरक्षाकर्मीहरुले । तस्वीरमा, दमौली कारागार, ईकान्तिपुरबाट साभार तस्वीर ।
April 07, 2010 5:50 am
राजनीतिक दाउपेच कुटपिटमा परिणत हुँदै
हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटमा माओवादी र काँग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप र विवाद भएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु नै लगाउनुपर्‍यो ।
सिमिकोटमा माआवादीले गरेको जनसभामा सहभागी हुन जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट आएका माओवादी कार्यकर्ता र काँग्रेस कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको प्रशासनले महसुस गरेपछि आफुले चाल्ने कदम चालिहाल्यो, जे भयो ठीक भयो, तर यो राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्देशित हो भने यसको असर दीर्घकालसम्म रहन सक्छ ।
स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रशासनले कफ्र्यू लगाएपनि झडप रोकिएको छैन । भनेपछि झडपमा साँच्चै गरी बल प्रयोग भएको हुनसक्छ दुवैपक्षबाट । माओवादी सभासद् कर्णजीत बुढाथोकी, सिमी लामाले सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् भने काँग्रेस नेताहरुले पनि सुरक्षाको माग गर्दै जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यो हेर्दा दुवै पक्ष भयभीत छन् त्यसैल प्रशासनलाई गुहार मागेजस्तो गर्छन् तर लडाइँ गर्न पनि पछि पर्दैनन् ।
वास्तविक अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन प्रशासनलाई गाह्रो पर्दैनथियो होला । जब लडाइँका साझेदारहरु नाटक गर्छन् भने त्या निकै गाह्रो पर्ने अवस्था हो । यही अवस्थालाई बुझेर हुनुपर्छ प्रशासनले कर्फ्यु लगाएको । समाधान कर्फ्यु हुन्छ भनेर बुझ्नु पनि अर्को समस्या हो । अहिले राजनीतिक आवरणमा भएको झगडा अर्कोपटक छिमेकी, परिवार हुँदै व्यक्तिव्यक्तिको झगडामा पुग्यो भने त्यसले पुर्‍याउने क्षति सम्बन्धित सर्वसाधारण, जो सोझा छन् तिनले मात्रै लिने हो । कसैले सुन्नेवाला छैन ।
सवाल यो हो कि, यस्तो अवस्थामा पनि माओवादी र काँग्रेसका नेताहरु के गरेर बसेका होलान् । नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर वार्ता र समझदारीतर्फ लाग्नुपर्ने होइन ? बरु सत्ताको हानथापमा लागेका हुनाले यस्ता घटना बढ्ने हुन् कि भनेर चिन्ता गर्नुबाहेक सामान्य नागरिकसँग अरु के नै उपाय होला र । सञ्चारमाध्यमले घटनालाई प्राथमिकतामा राखे । गम्भीरतालाई बुझी सम्बन्धित पक्षले समाधानको बाटो खोज्नु नै वेश होला कि ।
दुई पार्टीबीच मात्र होइन, स्याङजामा वाइसीएलले आक्रमण गरी मातृका यादव समर्थित माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज भीमप्रसाद चापागाईंसहित परिवारका पाँच जनालाई घाइते भएका छन् । यो पनि कुटपिट, लुटपाट, धम्की, हत्याकै श्रृंखला नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने कुटपिट धम्कीकै भरमा टोल, गाउँ, जिल्ला, देश चल्नुपर्ने स्थिति आएपछि पीडित हुनुबाहेक धेरे विकल्प रहेनन् । यो नै धेरैको अनुभुति हो ।
April 05, 2010 12:34 am
गर्व गर्नेमात्रै नेपाल टेलिकम
शहरमा बस्दै आएको छोराले घर बाबुलाई मोबाइल सेवामार्फत फोन गरेछ । सुरुवाती अभिवादनका कुरा भए । केही अरु व्यवहारिक कुरा पनि भए । त्यही क्रममा छोराले 'के गर्नुभएको' भनेर भनेछन् । बाबुले बुझेछन् 'के खन्नुभएको' भनेर । त्यहीअनुसार उत्तर पनि दिए कि, खेतमा आलु खन्दै गरेको भनेर । खासै फरक पारेन यी बाबुछोराको कुराकानीमा, टेलिकमको नेटवर्क गडबडीले ।
यस्तै कुराकानीका क्रममा आर्थिक लेनदेन, मायाप्रेम, मानिसको जीवनका कुराका बारेमा अनर्थ आउने किसिमले आवाज सम्प्रेषण भयो भने के होला । घाटा बाहेक केही हुन्न । चालीस लाख, पचास लाखका ग्राहक, भन्दै अखबार र होर्डिङ बोर्डले शहर ढाक्न पैसा भएको नेपाल टेलिकमले सेवाको गुणस्तरबारे किन चुप लागेर बस्ने गरेको छ, यसबारे कहिल्यै स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैन ।
गुणस्तर र सेवा बारे गुनासो सयौं हजारौं आउँछन् होला, तर तिनको समाधानात्मक उपाय निकाल्न सकेको अवस्था छैन । रेडिमेड जवाफ बनाएर बसेका हुन्छन्, टेलिकमका कुर्चीवालाहरु । भन्छन् कि वायरलेस नेटवर्कमा अलिअलि कमजोरी त भइहाल्छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाउने अधिकांश सेवा पाएर पनि यो सेवा प्रदायक कम्पनीले ढाँट्न छाडेन ।
वायरलेसबाहेकका वायर नै भएका प्रविधिका बारेमा गुनासोबारे साना तर पैसो ठुलै खाने कर्मचारी के नै गर्न सकिन्छ र, भन्नु सामान्य नै भएको छ भने ठुला कर्मचारीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने मात्रै हुन् । बरु अन्तरराष्ट्रिय लगानीका कम्पनीलाई सुविधार दिएर उत्कृष्ट सेवा दिन लगाए हुन्थ्यो । तर त्यो गर्नका लागि राष्ट्रियता, आफ्नोपन अनि आफ्नै मान्छेको कुरा आउने गर्छ ।
नीतिगत तहमा नेतृत्व गर्नेलाई पनि पैसा आउने भए हुन्छ । सेवा नदिइकन राजश्व गर्ने नै धुन छ । सेवा राम्रो नदिइकन पैसो जम्मा गर्न पाए कस्लाई खुशी नलाग्दो हो र । अहिले त्यस्तै भएको छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । किनभने टेलिफोन, इन्टरनेट जस्ता सेवामा ग्राहकको संख्या बढेको छ तर व्यावसाय, आधुनिक सञ्चारमा प्रवेश गर्न चाहने युवा, ग्लोबलाइजेशनअनुसार चल्न चाहने पेशाकर्मीलाई भने देशकै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुबाट पछाडि धकेल्ने काम भएको छ । यसको परिवर्तनमुखी आकांक्षा र क्षमता लिएर को, कहिले आउने हुन् कहिलेसम्म पर्खने । बरु आफ्ना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि लुछाचुँडी हुनु सामान्य भइसकेको छ ।
April 03, 2010 2:35 am
किन बाध्य छन् युवाहरु थिचिएको अनुभव गर्न ?
त्यसो त युवाको परिभाषाबारे निकै खालका टिकाटिप्पणी हुने गर्छन् खासगरी राजनीतिक वृत्तमा रहेर बहस गर्दाका बखत । सबैले मान्ने अनि भन्ने गरेको कुरा, युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् । युवाका बारेमा सार्वजनिक रुपमा जति जे भनेपनि युवाहरुका संगठन, उनीहरुको क्षमतालाई कदर गरेर परिवर्तनको मूलधारमा आउनै दिइन्न । यसका लागि मुख्य गरी राजनीतिक दलको नेतृत्व जिम्मेवार छ भन्न सकिन्छ भने दलइतरका समाजका हरेक अंग पुरानै मानसिकताबाट जकडिएको छ ।
युवाको प्रतिनिधित्व गर्ने तर चालीस ननाघेका बौद्धिक जमातले गर्ने कामलाई ठाउँ नदिने चलन निकै छ । उदाहरणका लागि काँग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी नै किन नहोस्, दलको नेतृत्वमा खाली तिनै बुढापुराना नेता छन् । जसले राजनीतिक परिवर्तनमा कुनैबेला समयले बनाएको नेतृत्वको कुरालाई महत्व दिएर सधैंभरि नेतृत्व सम्हाल्न खोज्छन् । नेतृत्वमा बसेर युवाहरुलाई परिचालन कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेसम्मको सोच पनि पुरातन खालकै छ ।
उदाहरणका लागि हालका मन्त्रीहरुले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका बारेमा राख्ने सोचलाई लिन सकिन्छ । क्याम्पसमा युवाहरुको संगठनअन्र्तगत स्ववियु स्थापना भएका छन् । तिनमा विभिन्न राजनीतिक दल नजिकका विद्यार्थी संगठन आबद्ध हुन्छन् । स्ववियुलाई कुनै विकास निर्माणका कामका लागि सदुपयोग गर्ने विषयमा कसैले सल्लाह दियो भने, उनीहरुले सजिलै भनिदिन्छन् कि, स्ववियु जस्ता संगठनलाई पनि खन्ने काममा लगाउने, भनेर ।
हो, स्ववियु मध्ये पनि इन्जिनियरिङको छ भने त्यसले नक्सा बनाउन सक्ला, विरुवाको अध्ययन गर्ने छ भने वृक्षरोपणको योजना बनाउन सक्ला । केही ढंग नभएको छ भने बाटो खन्ला । सही उपाय हो । काम गर्नुपर्ने यसरी हो भनेर भुक्तभोगीहरु नै भन्छन् । तर दलका नेताहरु युवाहरुलाई आफ्नै अगाडि पछाडि लगाएर हिंड्न पाए भने निकै गौरव गर्छन् । आफ्ना कार्यकर्ताका रुपमा सधैंभरि जीवन जिएको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरुबाट हुने सही कामको सम्भावना अत्यन्त कम देख्छन् ।
नीतिगत कुराहरु पनि छन्, दुखेसो पोख्नुपर्ने । युवाहरुले लेखेको एक पुस्तकको समीक्षा गर्दै अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले युवाहरुका बारेमा ठुला दलहरुले पनि खास रणनीति बनाउन सकेनन् । बनाउन पनि कसरी आफ्नो सम्पूर्ण पार्टीको आर्थिक स्थितिको बारेमा त बोल्न सक्दैनन् दलहरु तिनले कसरी बनाउने युवा रणनीति । माओवादीले बन्दुकबाट परिवर्तन भएर लाठीमुङग्रा, काँग्रेसले चाकडी, एमालेले युथफोर्स बनाएर शान देखाउनै ठीक्क छ । अनि कसरी हासिल हुन्छ उपलब्धि, भाषण दिने बाहेकका उपलब्धिमुलक काममा ।
विदेशी तिकडम र शिक्षण अस्पताल
दिउँसै अँध्यारोजस्तै उपत्यका
काठमाण्डौं अँध्यारो र उज्यालो हुन बेरै लाग्दैन । उपत्यकामा अँध्यारो उज्यालो हुनका लागि धेरै कारण छन्, एक नम्बर कारण राजनीति नै हुनुपर्छ । दुई नम्बरमा हुनुपर्छ, आपराधिक घटना, अनि तेस्रो कारण हुनुपर्छ, डिस्कोका युवतीको विषय । तर पछिल्लो पटक भने डिस्को सिस्को केही नभएर मौसमको कारण अँध्यारोको सामना गरे, राजधानीबासीले । यो त्यति अस्वभाविक त पक्कै होइन ।
सञ्चारमाध्यममा आउँदै थियो, उपत्यकाको तापक्रम अघिल्ला दिनभन्दा केही कम मापन भएको भनेर । यस्तै हुँदै गर्दा पोखरामा भने असिना पानीले बबाल गरेको भनेर समाचार आउन थाले । त्यतिमात्र होइन कि पोखरामा त अँध्यारो भएकाले गाडी समेत चलाउनुपर्‍यो बत्ती बालेर, दिउँसै । एक सञ्चारकर्मीले रेडियोमा समाचार वाचन गर्दागर्दै नालीबाली नाश भएको भनेपनि बालीनाली नाश हुनेगरी पोखरामा असिना पनि निकै पर्‍यो ।
मौसम गडबड हुने त्यति सामान्य त होइन, तर अँध्यारो भएको भन्ने विषय चाहिं बडो चाखलाग्दो विषय बनेको काठमाण्डौं र पोखरा लगायतका ठाउँको मौसमको विषयले । मौसम पनि त्यस्तै भएको मौका छोपेर सिंहदरबारमा भने उद्योगी व्यवसायीले उद्योग धन्दा बन्दगरि साँचो सरकारलाई बुझाउने निर्णय फिर्ता लिएका छन् । थोरै फाइदा खाएर व्यावसाय चलाउन नमान्ने उद्योगीले साँचो बुझाउने होलान त ? हुन त यो सांकेतिक होला ।
उद्योगीहरुले एक महिनाअघि भनेका थिए कि यो अवधिमा शान्ति सुरक्षामा सुधार भएन भने साँचो दिने भनेर । उद्योगीले भने, 'प्रधानमन्त्रीज्यू, साँचोको जिम्मा लिने हो त ?' एउटा सिंहदरबारमा र त्यसअन्र्तगतका साँचोको जिम्मा लिन नसकेर यो हविगत भएका बेला प्रधानमन्त्रीले अर्बौको सम्पत्तिको जिम्मा पनि लिऊन् कसरी । भने, 'सुन्नुस्, घाटामा भएका उद्योग मात्र दिन खोज्नुभएको हो भन्ने मैले बुझिसकेको छु, मन्त्रिपरिषदबाट केही आउँछ ।' कम्ती बाठा छन् हाम्रा प्रधानमन्त्री, फाइदाको भए त लिने भन्ने आशय । ठ्याक्कै यही नभएपनि कुरा चैं यही हो जस्तो छ ।
उद्योगीले भने, 'होइन, प्रधानमन्त्रीज्यू, हामीले दिने भनेको सुरक्षाको लागि हो, सञ्चालन गर्न होइन ।' त्यसो त उद्योगजति जिम्मा दिनलाई व्यावसायीलाई पनि बहुला कुकुरले टोकेको होइन भन्ने बुझे । त्यही नबुझेर साँचो लिन मानेनन् प्रधानमन्त्रीले । तर बिचरा उद्योगीहरु भने राजनीतिज्ञको चिल्लै कुरामा फसेर होला, आश्वासन आएको छ भनेर मुसुमुसु हाँस्दै फर्किए । उपाय पनि त के थियो र, त्यसो गर्नुबाहेक । तस्वीरमा, पोखरामा दिउँसो देखिएको दृश्य ।
बन्दको भूतले नछोडेपछि
सिरहामा आफ्ना कार्यकर्ताको हत्या भएको विरोधमा माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले देशभरका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गरायो । काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पताल १७ औं दिन पनि बन्द नै रहेको छ । यी घटना देशमा भएका बन्दका श्रृंखला मध्येका डरलाग्दा र दर्दनाक खालका घटना हुन् बन्दका रुपमा । यस्ता बन्दका कथा त कति छन् कति, पुर्वदेखि पश्चिमसम्म ।
माओवादीको महासंघले देशभरका उद्योग-कलकारखाना बन्द गरेको हो । बन्दले काठमाडौं लगायत देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा कामकाज ठप्प भयो । अज्ञात समूहले सिरहाको मलहनियामा माओवादी कार्यकर्ता रामअयोधी यादवको गोली हानी हत्या गरेको थियो । हत्याका घटना घटेको भनेर प्रधानमन्त्रीले 'वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा' भनीभनी सुरक्षामा निकै सुधार आएको बताइरहे पनि पार्टीका कार्यकर्तादेखि लिएर सर्वसाधारणको हत्या रोकिएको छैन ।
बरु सरकार, अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्यकर्मीको मनपरी विरुद्ध स्थानीय वासिन्दा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यतिमात्र होइन, पदाधिकारीको राजिनामा मागिरहेका चिकित्सकहरुको माग पुरा गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै अनियमिततामा मुछिएका दुई अधिकृतलाई उपत्यका बाहिर पठाएर कारबाहीको थालनी गरेका नयाँ प्रधानन्नयाधीशले यो विषयमा चासो देखाएर राम्रो काम गरेका छन् ।
जिल्लाजिल्लाबाट आएका बिरामीको चिकित्सकको बन्दले बिजोग भएको छ भने माओवादीको बन्दले प्रचण्डले दिएको आदेशको उल्लंघन भएको छ । प्रचण्डको आदेश पो कस्ले मानेको छ र भन्ने बेला नआऊला भन्न सकिन्न । किनकि बन्द नगर्ने प्रचण्डको आदेश बाग्मतीमै बगाइएको छ । त्यही प्रमाणित गरेका छन् माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ताहरुले । पार्टीभित्र नै यस्तो चाला छ भने अब संयन्त्रमार्फत समस्या समाधान गर्न कस्ले सहयोग गर्ने होला । दक्षिणी प्रभुहरुको त कुरै छाडौं ।
सुरक्षा दिनुपर्ने अंगहरु पनि उस्तै, त्यही नाममा भएका घटनापछि निकै आक्रोशित हुने संगठनहरु पनि उस्तै, त्यही भन्दै बन्द गर्ने र बन्दलाई मान्न बाध्य हुने समाज र राजनीतिक दलहरु पनि उस्तै । कसैले बन्द भनिदियो कि, त्यसलाई मान्न परिहाल्ने पुर्वीय संस्कृति, लोकतन्त्रका नाममा अराजकता सहने क्षमता कस्ले दिएछ, नेपाली समाजलाई त्यसको पो शोध गर्नुपर्ने बेला आएको छ, अब । तस्वीरमा, सुरक्षाको मागसहित सडकमा उत्रिएका चिकित्सक ।
सडक अवरुद्ध गर्दाको दुष्परिणाम
सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा भएको बस दुर्घटनामा ९ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । दुुर्घटनामा परी २३ जना घाइते भएका छन् । स्थानीय बासीले बाटो अवरुद्ध गरेको समयमा बाटोबारे बुझ्न जाँदा असावधानीवश गाडी नियन्त्रणमा नरहँदा दुर्घटना भएपछि सो क्षति भएको हो । बिजुलीका सामान लिएर गाउँमा झिलीमिली बत्ती बाल्ने सपना बोकेका ती सर्वसाधारणको त्यत्तिमै सपना तुहियो । अझ केही विवरणअनुसार त गाडीमा चढेका केही युवाले चालकलाई जर्बजस्ती गाडीबाट बाहिर निकालेका थिए ।
दुर्घटनामा मृत्यु हुने काभ्रे बेखसिम्ले गाविसका माइला लामा, कृष्ण बहादुर भुजेल, अमर बहादुर तामाङ, लालबहादुर तामाङ, चित्रबहादुर तामाङ, इमान सिंह तामाङ, बुद्ध तामाङ, नारायण पहरी र मोतीलाल पहरीले बित्थैमा ज्यान गुमाए । अर्थात केही मुर्ख मनुष्यको कारणले उनीहरुको ज्यान गयो । घाइते मध्ये दुई जनाकोे अवस्था गम्भीर छ । घाईतेहरुलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइएको छ ।
आखिर यसरी दुर्घटना हुनुको पछाडि धेरै कारण यस्तै जानीजानी गरिएका गल्ती धेरै हुने गरेका छन् । अनियन्त्रित गतिमा गाडी चलाउने, पहाडको घुमाउरो बाटोमा सडकको कमजोर अवस्थालाई ध्यान नदिने, सडक मर्मत नगर्ने, रक्सी खाएर होहल्ला गर्ने अनि चालकको ध्यान अर्कोतिर मोडिदिने । यस्ता मुख्य कारण नै दुर्घटनाका मुख्य कारण बनेका छन् । दुर्घटनाकै सिलसिलामा, तनहुँको तारुकाबाट सदरमुकाम दमौली जाँदै गरेकोेे बस कात्तिकेचौरमा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना घाइते भएका छन् ।
यतिमात्र होइन, सबैभन्दा मुख्य कारण बनेको छ, सरकारी नीति । सवारी दुर्घटनाको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा सिन्धुपाल्चोकको घटनालाई लिने हो भने सडक र राजमार्ग बन्द गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने सरकारले बनाएको ऐन नै कार्यान्वयन गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । सडक दुर्घटना, यात्रुका अनावश्यक तनाव कम गर्नका लागि यस्ता खालका नीति बनाइएका त छन् तर तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
राजनीतिक नेताको मृत्यु हुँदा निकै ठुलो महत्व हुन्छ । अथवा देशको भविष्यमा नीतिगत तथा चेतनाका लागि उसले दिएको महत्वलाई धेरै आँकलन गरेर राम्रो मुल्याङकन गरिन्छ । तर तिनै नेताहरुको सहभागितामा बनेका नीति कार्यान्वयन नभएर निम्तिएका दुर्घटना, जसले सयौंको ज्यान जान्छ, बर्षेनि । त्यस्तो अवस्थामा एउटा समाचार बनेपछि ती घटनाको लेखाजोखा हुन्न । यो सर्वसाधारणमाथिको अन्याय नभएर के होला । विभिन्न खालका सवारी दुर्घटनाका कारणले ज्यान गुमाएका मानिसका परिवारले भने जिन्दगीभर पीडामा बाँच्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको अवस्था छ । तस्वीरमा, सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटना भएको बस ।
फलामे ढोकाको चहलपहल
स्वास्थ्यमन्त्रीलाई डाक्टरको संख्या थाहा छैन
प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको संख्या थाहा भएन भने के होला । घरमूलीलाई आफ्नै परिवारका सदस्यको संख्या थाहा भएन भने के होला, त्यतिमात्र होइन, आफुले कमाण्ड सम्हालेको सैनिक अधिकृतलाई कतिजना लडाइँमा सहभागी छन् भन्ने थाहा भएन भने त बिजोगै हुन्छ होला । बिजोग नै भनिहाल्न नमिलेपनि नेपाल सरकारका एकजना माननीय मन्त्रीले भने सबैलाई देखाइदिएका छन् असली कुरा, आफ्नै क्षमताको ।
नेपाल मनोचिकित्सक संघको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन राजधानीमा भएको छ । सो सम्मेलनमा अतिथिका रुपमा उपस्थित भएर स्वास्थ्यमन्त्रीज्यूले नेपालमा रहेका मनोरोगी, अस्पताल तथा चिकित्सकको बारेमा भने पटक पटक अनभिज्ञता प्रकट गरिदिए । कति न, बहादुरी देखाएजस्तो गरी । यसलाई कुनै पनि हालतमा बहादुरी भन्न मिल्दैन । किनभने आफ्नो मन्त्रालयले हेर्ने क्षेत्रका बारेमा कम्तीमा कार्यक्रममा आउँदा जानेजस्तो गर्न त सोधेर आउनुपथ्र्यो नि, त्यति पनि भएन ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका ३० जना भन्दा बढी मनोचिकित्सक सहभागी छन् । सम्मेलनमा मनोचिकित्साबारे २३ वटा कार्यपत्र पेश गरिंदैछ । विश्वस्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वमा अहिले ४५ करोड मानिस मानसिक रोगबाट पीडित छन् । नेपालमा ५० लाख व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक रोगबाट पीडित रहेको तथ्यांक छ । विश्व स्वास्थ्य, नेपालकै कर्मचारीले निकालेका प्रतिवेदन अध्ययन नगरेको हुनाले मन्त्रीले समेत यो लाचारी प्रकट गरेको हुनसक्छ । मन्त्रीलाई गाली गरेर मात्र के गर्नु, पद्धतिको पो कुरा हो ।
नेपालमा जम्मा ५३ जना मनोचिकित्सक रहेकोमा २५ प्रतिशत विदेशमा, २५ प्रतिसत उपत्यका बाहिर र बााकी ५० प्रतिशत काठमाण्डौंमा छन् । मनोचिकित्सकको अभावले विरामीको उपचारमा समस्या भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ । बरु यो दर्दनाक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य मन्त्रीले र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यहाँ त के भएको छ भने जुन रोगी बढी छन् त्यही रोगका चिकित्सक छैनन् ।
यसरी त जनता नभएका ठाउँमा राजा भएको भनेजस्तो भइहाल्यो नि । अलि उल्टो भयो कि, त्यसो हो भने काम कुृरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने सुहाउला कि । अथवा यसलाई समस्या एकातिर भएपनि सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्न सकिन्छ । बरु चिकित्सक उत्पादन गर्दा सबैभन्दा खतरनाक रोगका रुपमा रहेका तथा संख्या धेरै भएका रोगका बारेमा अनुसन्धान गरेर त्यसको निराकरणका लागि लाग्ने हो कि । वास्तवमा साढे दुई करोड जनसंख्या भएको देशमा ३० लाख मनोरोगी हुनु ज्यादै दुःखलाग्दो कुरा हो । तस्वीरमा, स्वास्थ्यमन्त्री ।
जर्बजस्ती गर्ने बानी परेपछि